I-Panda Pattern nge-Wooden Handle Super Bath Brush China Manufacturer
Incazelo:I-Soft Bath Brush yoMzimba,Isibhamu se-Hand Hand Brush,I-Panda Pattern Bath Brush
Home > Imikhiqizo > Ibhulashi elilodwa > Ibhulashi le-Blend > I-Panda Pattern nge-Wooden Handle Super Bath Brush
I-Model No.: ycS004
Ukukhiqiza: 200000 picecs/month
Le shayela elisha lokugeza liphethe isibambo eside sokhuni esifinyelela kalula kuzo zonke izingxenye zomzimba, okwenza kube lula futhi ukhululeke kakhulu ukugeza. Izinwele ezenziwe ngezandla ezinomsoco nezesikhumba, hlola isikhumba sakho, ususe ukukhathala kwosuku, futhi ujabulele isikhathi sakho sokugeza. Izitshalo ezenziwe ngezandla zinikeza ulwazi olusha lokusondelana nemvelo.
Umdwebo omuhle we-panda cartoon uveza injabulo efana nengane efihlekile futhi ibuye ifanele kakhulu isikhumba esibucayi somntwana. Le shayela lokugeza linezintambo zokulenga ekupheleni kwesibambo sokhuni, esizibheka ngokugcwele izidingo zomsebenzisi. Ngemuva kokusetshenziswa, kulula ukulenga futhi usomile, futhi luzooma ngokushesha ngaphandle kokuthinta ukusetshenziswa okulandelayo.
Umklamo wokupakisha webhashishi lokugeza uzokuvikela ngokugcwele umkhiqizo kusuka ekulimaleni ngesikhathi sokuhamba. Yebo futhi samukela izidingo zakho zokupakisha ngokwezifiso.
Umklamo wethu oqondile kanye nokukhiqizwa kwamabhulashi aphezulu okugeza okubambisana banomsebenzi omkhulu wokuncintisana embonini efanayo. Siyakwamukela ukuxhumana nathi. Sizohlinzeka ngezinsizakalo zebhizinisi ezinobungane kakhulu nezomsebenzi. Ukwaneliseka kwakho kuwumsebenzi wethu.
I-New Metal Yenza izikhwama ze-Eyeshadow ye-Eyebrow Xhumana Nanje
I-Soft Bath Brush yoMzimba Isibhamu se-Hand Hand Brush I-Panda Pattern Bath Brush